Category Select Restaurant Type Alcohols American Restaurant Asian Fusion Restaurant Bakery Bakery Shop Bar BBQ Restaurant BBQ/Grilled Food Beer Shop Beers Bubble Tea Bubble Tea Shop Buffet Burger/Fried Chicken Shop Burmese Tea Cafe Candy Candy/Dessert Shop Certified Halal Food Chicken Rice Chicken Wings Chin Restaurant Chinese Buns (Pauk Si) Chinese Restaurant Chit Tee Restaurant Chocolate Club Cocktails Coffee Coffee Shop Curry Dan Pauk (Biryani) Dan Pauk (Biryani) Shop Dessert Dessert/Ice Cream Shop Dim Sum Dim Sum Restaurant Donuts/Sweets European Restaurant Fast Food Fine Dining Food Center Food Court French Restaurant Fried Chicken Fried Food German Restaurant Halal Restaurant Hamburger Healthy Food Hong Kong Restaurant Hot Dog Hot Pot Hot Pot Restaurant Hotel Restaurant Ice Cream Indian Restaurant Indonesian Restaurant International Cafe/Restaurant Italian Restaurant Japanese Restaurant Juice Kachin Restaurant Karaoke Kat Kyay Kite Kaw Yay Noodles Korean Restaurant Kyay Oh Kyay Oh Restaurant Malaysian Restaurant Mediterranean Restaurant Meik Restaurant Mexican Restaurant Milkshakes Mote Hin Gar Mote Thi Myanmar Restaurant Myanmar Traditional Dishes Myanmar Traditional Food Myanmar Traditional Fries Myanmar Traditional Salad Myanmar Traditional Snacks Nightlife Noodles Outdoor Pan Thay Restaurant Pasta Pizza Pizza Shop Pork Sticks Pork Sticks Shop Rakhine Restaurant Ramen Russian Restaurant Sake Salads Sandwiches Sar Tay Seafood Seafood Restaurant Shan Noodles Shan Restaurant Shisha Shwe Taung Noodles Si Chet Si Chet Shop Singaporean Restaurant Smoothies Snack Soup Steak Steak House Sticky Rice Street Side Sushi Bar Sushi/Sashimi Sweet Taiwanese Restaurant Takeaway Tea House Tempura Thai Restaurant Traditional Alcohols Traditional Burmese Traditional Food Traditional Tea Shop Vegetarian Vermicelli Vietnamese Restaurant Western Restaurant Wine Wonton/Dumpling Yogurt Yogurt Shop
Townships Select Location Ahlon All Bagan/NyaungOo All Mandalay All Nay Pyi Taw All Pyin Oo Lwin Bahan Botataung Dagon Dagon Seikkan Dala Dawbon East Dagon Hlaing Hlaingthaya Insein Kamayut Kyauktada Kyimyindaing Lanmadaw Latha Mayangon Mingala Taungnyunt Mingaladon North Dagon North Okkalapa Pabedan Pazundaung Sanchaung Seikkan Seikkyi Kanaungto Shwepyitha South Dagon South Okkalapa Tamwe Thaketa Thanlyin Thingangyun Yankin
Food Reviews in Yangon
"KFCက menuအသစ်ဖြစ်တဲ့ K Pop Fried Chickenနဲ့ Coke Freeze"
4233 Views4years ago
မနေ့က KFCမှာ menuအသစ်တစ်ခု ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းရထားလို့ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမပေါ်က KFCကို MyLann သွားစားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဆိုင်ထဲရောက်တော့ အော်ဒါကောင်တာမှာ အမ m...
“၇၆မိုင်မှာ KFC ဖွင့်ပြီဟေ့”
3603 Views4years ago
နိုဝင်ဘာလ (၁၅)ရက်နေ့တုန်းက KFC Myanmar ရဲ့ဖိတ်ကြားမှုကြောင့် MyLann အဖွဲ့ ၇၆မိုင်ရဲ့ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းမှာဖွင့်လှစ်မယ့် KFC ဆိုင်ခွဲကို ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။...
City Mall ကြီးဖွင့်လို့ သွားစရာ၊ စားစရာတစ်နေရာတိုးတာ ဘုရားကပေးတဲ့ဆုလာဘ် (၂၀)ကျော်သွားလို့ ဘက်ဂျက်ကာလလေးဖြစ်နေတာက ကိုယ့်အတွက်ပစ်ဒဏ်များဖြစ်နေမလားကွာ :P :P
4073 Views4years ago
စတာပါ… နောက်တာပါ…။ လကုန်ခါနီးလေးဆိုတော့ ဘယ်သွားကြမယ်၊ ဘာစားကြမယ် စသဖြင့် ပလန်ချနေသူတို့အတွက် နေရာကောင်းလေးတစ်ခုပါပါသွားအောင်ပါ..။ City M...
Latest Activities of Restaurants on MyLann	View All Activities
myatnoe reviewed K-sinpo Vegetable Chicken3years ago
Özal reviewed Lucky Seven (49th Street Branch)3years ago
မုန့်တော်တော်စုံစုံ ရပါတယ်။ အရသာလည်းကောင်းပါတယ်။ ဈေးက အလယ်အလတ်ထက် နည်းနည်းမြင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေအသွားများတဲ့ဆိုင်တချို့လို့ အရမ်းကြီးမကြီးပေမဲ့၊ လမ်းဘေးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်အများစုလောက်တော့လည်း မပေါပါ။ သန့်ရှင်းမှု အတော်မြင့်ပါတယ်။ အချိန်တိုင်းလိုလို လူရှုပ်ပါတယ်။ ဆူပါတယ်။ ညနေပိုင်းဆိုင်မပိတ်ခင်တဝိုင်လောက်ပဲ ရှင်းပါတယ်။ အပြင်ဘက်မှာ ထိုင်လို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီနေရာက အများပြည်သူနေရာကို ကျူးကျော်ပြီးဆိုင်ခင်းထားတာကို ကိုယ်ကပါ အားပေးအားမြှောက်လုပ်ပြီး ထိုင်နေရတဲ့အတွက် စိတ်တော့ သိပ်မသန့်ပါဘူး။ ဝန်ထမ်းတွေ တာဝန်ကျေပါတယ်။ လူထိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ စားပွဲထိုးချက်ချင်းရောက်လာပါတယ်။ မှာထားတာရောက်ဖို့လည်း သိပ်အကြာကြီးမစောင့်ရပါဘူး။ အဲဒီက မုန့်ဟင်းခါးကို တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်။ သူ ရောင်းတဲ့ အရည်ခပ်ကျဲကျဲ၊ အရောင်နီနီ၊ စပါးလင်နံ့သင်းသင်းနံ့နဲ့ မုန့်ဟင်းခါးမျိုးကို ရန်ကုန်မှာ သိပ်တွေ့လေ့မရှိပါဘူး။ ခြုံပြောရရင် စားစရာတွေကောင်းပါတယ်။ အေးဆေးစကားပြောလို့တော့ မကောင်းပါဘူး။ တခြားစကားဝိုင်းတွေက အရမ်းများလွန်းနေလို့ပါ။
Özal reviewed 36th Street Kyay Oh3years ago
ကြေးအိုးအရသာ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ ပန်းဆိုးတန်းမှတ်တိုင်နားကဆိုင်နဲ့အရသာအတူတူပဲလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဆိုင်က အများကြီး ပိုသန့်ပါတယ်။ ဆိုင်အပြင်အဆင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ သန့်ရှင်းမှုရှိတဲ့ဆိုင်မျိုးပါ။ အခုလက်ရှိ (၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈) မှာ ကြေးအိုး-ရှယ်တစ်ပွဲကို ၃၈၀၀ ပါ။ အရည်အသွေးအတူတူချင်းကို နာမည်ကြောင့် ဈေးပိုကြီးနေတဲ့ဆိုင်တွေထက်တော့ ပိုတန်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ပြီး ဆိုင်ကများသောအားဖြင့် လူရှင်းပါတယ်။ လူအရမ်းရှင်းလွန်းတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ စားပွဲထိုးတချို့က သီချင်းအော်အော်ဆိုနေတာ နားငြီးပါတယ်။ အဲဒီလို တစ်ခါတလေနားငြီးအောင်လုပ်တာကလွဲလို့ စားပွဲထိုးတွေ ယဉ်ကျေးကြပါတယ်။ ဆိုင်ရှေ့မှာ ကြိုက်သလောက်သောက်ဖို့ စတီးရေအိုးကြီးနဲ့ခွက်တွေ ချပေးထားပါတယ်။ စားပွဲဝိုင်းတွေမှာတော့ ရေဘူးသက်သက် ချမပေးထားပါဘူး။ ရေသန့်မှာရင်တော့ ရမှာပါ။ အဲကွန်းတော့ သတိမထားမိပါဘူး၊ ပန်ကာတော့ ရှိပါတယ်။ တီဗွီအကြီးနဲ့ စကိုင်းနက်ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားကာလတုန်းက ဘောလုံးပွဲဖွင့်ထားတာ ကြုံဖူးပါတယ်။ ချုံပြောရရင်တော့ ဒီဆိုင်မှာသွားစားရတာ များသောအားဖြင့် ကျေနပ်မှုရပါတယ်။
Lu Thit reviewed Chilli Pot4years ago
fusuparu reviewed Izumi5years ago
Yin Wai Jee Pay reviewed Shwe Ye ( Myaynigone)5years ago
ရွှေရည်မှာအများဆုံးစားဖြစ်တာက မုန့်ဟင်းခါးပါ။ အချိုမုန့်မသုံးတာရယ် မြန်မာမုန့်လေးတွေရတာရယ် အရသာအဆင်ပြေတာရယ်။ အဓိကဈေးမကြီးတာရယ်ကြောင့်ကြိုက်ပါတယ်။ မုန့်ပြားသလက် ညနေပိုင်းလားနေ့လည်ပိုင်းလား ရတတ်ပါတယ်။
Hein Ko Linn reviewed Uptown Coffee Shop5years ago
Aung Win Thein reviewed Aung Myint Mo5years ago
One of the best Kyay Oh in Town. Good decoration and service in China Town. Fully air-conditioned restaurant so that no need to worry about sweat while eating
Bhoone Theinkha reviewed5years ago
စားမယ်​အဝစားhotpotဆိုင်​​လေးပါ အရမ်းတန်​တယ်​​နော်​အစား​သောက်​စုံတယ်​အရမ်းလည်း​ကောင်းတယ်​ သင်္ဃန်းကျွန်းAkk ဘက်​​ရောက်​ရင်​ဝင်​စားကြည့်​ကြပါဦး
Rosa Aung reviewed One Cool Cafe5years ago
Rosa Aung reviewed yaughtstreet5years ago
Özal reviewed Food Garden5years ago
Good food. Wide range of choices in the menu filled with Chinese, Thai and Traditional dishes and cold/hot drinks. Reasonable price. Clean environment. Polite waiters. Family friendly.
Kuslar Zoe reviewed Zakargyi Mote Hin Gar5years ago
The last time I ate, there wasahair in the coconut noodle. Not going there again. There is zero quality control.
Aung Thu reviewed Aung Se Sein6years ago
Zarni reviewed Wa Toke Kyee Special BBQ Buffet6years ago
myat t reviewed KVAS Restaurant & Bar6years ago
Good restaurant with ample variety men us to offer. Hit this restaurant during the lunch hour and get different set of menu for discounted set prices asastarter. Come back in the night to get more if you like it...
myat t reviewed Wasabi Japanese restaurant6years ago
Good Japanese restaurant run byaJapanese guy. Nice selection of usual food like sushi, don, yakitori sets. Ramen and nice set of nabe soup set is available as well. Souchu and other sake sets can be ordered too....